मंगलवार बाट ‘कृ’को बुकिङ खुल्ला ! « Pariwartan Khabar
मंगलवार बाट ‘कृ’को बुकिङ खुल्ला !
8 February, 2018 3:50 pm
बहुप्रतिक्षित सिनेमा ‘कृ’ को बुकिङ खुल्ला गरिएको छ । शुक्रबारबाट रिलिज हुन लागेको सिनेमाप्रति दर्शकको उत्साहपुर्ण क्रेजलाई मध्यनजर गर्दै मल्टिप्लेक्समा मंगलवार साँझबाटै बुकिङ खुल्ला गरिएको हो । सिनेमालाई क्युएफएक्स सिनेमाले मात्रै १८ शो दिएको छ । सिनेमाले सिभिल मलमा ६ शो, लविङ मलमा ५ शो, कुमारी हलमा ४ शो, जय नेपालमा ३ शो, एफक्यूवमा ६ शो पाएको छ ।
बुकिङ खुल्ला गरिएको केही घण्टामा नै मल्टिप्लेक्समा ‘कृ’ को टिकट दर्शकले ‘रिजर्भ’ गरिसकेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार, सिनेमा काठमाडौं र मोफसल गरि कूल ९० वटा सिनेमा हलहरुमा प्रदर्शन हुनेछ । सोलो प्रदर्शनमा आउन लागेका कारण पनि ‘कृ’ ले सर्वाधिक हल पाएको छ । खुल्ला गरिएको केही घण्टामै देखिएको आक्रामक बुकिङले गर्दा सिनेमाको ओपनिङ कस्तो हुने भन्ने समेत चर्चा बढेको छ । सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित सिनेमाले पहिलो दिन नै १ करोड बढिको ओपनिङ गर्ने अनुमान लगाईएको छ ।
सुवास इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा तयार भएको सिनेमाको प्रस्तुतकर्ता द सुपर काजोल फिल्मस् हो । सिनेमामा सुवास गिरी र भूवन केसीको लगानी छ । कमल गिरी कार्यकारी निर्माता रहेको सिनेमाका सह–निर्माता श्री पराजुली हुन् । सिनेमामा अनमोल केसी, अदिती बुढाथोकी, अनुप विक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, लक्ष्मी गिरी, रुपा राना लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।